उत्तर कोरियामा को बन्ला किमको उत्तराधिकारी ? – Korea Pati
April 30, 2020 गुरुदत्त न्यौपानेLeaveaComment on उत्तर कोरियामा को बन्ला किमको उत्तराधिकारी ?
सोल-उत्तर कोरियामा किम जोङ उनपछि कसले शाशन गर्ला ? यो सबैको प्रश्न हो । कतिपयले उनकी बहिनी किम यो जोङ सत्तामा आउने आँकलन गरिरहेका छन् त कतिपयले भने किमका भाई शासनमा आउन सक्ने बताइरहेका छन् । किम की बहिनी भने हाल शक्ति सञ्चयमा लागिरहेको विश्लेषकहरु बताउछन् । गत महिना गरिएको एक अध्ययन विश्लेषण अनुसार ३२ बर्षिया
किमकी बहिनीको राजनितिक फड्को गतिलो गतिमा अगाडी बढीरहेको छ जसको प्रमाण उत्तर कोरियाको सर्वोच्च जनसभामा उनको बढ्दो प्रभाव हो । वर्कर्स पार्टीमा रगतको राजनितिको बढ्दो प्रभाव पनि किम यो जोङको राजनितिक खुड्किलो चढ्ने गतिलो आधार हो । फैदु क्षेत्रबाट आएको किम बंशमा किम जोङ उन सँगै उनका
नाम नखुलाइएका भाइ तथा बहिनीको चर्चा उत्तिकै छ । तर बहिनी विवाहित भएका कारणले किमले बंश जोगाउन भाईलाई सत्तामा ल्याउने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको जानकारहरु बताउदछन् । किम जोङ उनका भाइ भने राजनीतिमा खासै रुचि नराखि स्वतन्त्र रुपमा जिवन बिताई रहेका सञ्चार माध्यमहरुमा जनाइएको छ । यद्यपि किमको आदेशमा उनी पनि सत्तामा आउन सक्ने विश्लेषकहरुले बताएका छन् ।
अर्कोतिर किमका काका किम प्योङ इल पनि सम्भावित उत्तराधिकारीको रुपमा खडा भएको बताइन्छ । ६५ वर्षीय किम उत्तर कोरिया संस्थापक पुस्ताको सबैभन्दा कान्छो जीवीत नेता हुन् । साथै उत्तर कोरियाका संस्थापक किम इल सङका छोरो पुस्ताका हुन् ।
जब कि, हालका शासक किम जोङ उन नाती हुन् । उनै दिवंगत संस्थापक शासक किमको १०८ औँ जन्मदिन गत अप्रिल १५ मा मनाउन सम्भव भएको थिएन । १९७० मा किम प्योङ इललाई उनका सौतेनी दाई किम जोङ इलले शासनले पन्छ्याएका थिए । १९९४ देखि २०११ सम्म उनले उत्तरको शासनसत्ता सम्हाले ।
किम प्योङ इलले हंगेरी, बुल्गेरिया, फिनल्याण्ड, पोल्याण्ड, र चेक रिपब्लिकमा उत्तर कोरियाको तर्फबाट ४० वर्ष उच्च कुटनीतिज्ञको रुपमा काम गरे । गत वर्ष मात्रै उनी उत्तर फर्किएका हुन् । किम २०११ म आफ्ना पिताको निधनपछि शासनमा आएका हुन् । पछिल्लो समय उनको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि उनको उत्तराधिकारी बारे अनेक टिप्पाणी हुन थालेका छन् ।